उपरखुट्टी लगाएर बस्ने बानि छ? यसकारण हुनसक्छ हानिकारक, जानिराखौं। – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/उपरखुट्टी लगाएर बस्ने बानि छ? यसकारण हुनसक्छ हानिकारक, जानिराखौं।
उपरखुट्टी लगाएर बस्ने बानि छ? यसकारण हुनसक्छ हानिकारक, जानिराखौं।
एमसीसीकि फातिमा नेपाल आएर विभिन्न नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रिका सामुन्ने पनि उपर खुट्टि लगाएर बस्दा उनकाे निकै आलाेचना भएकाे थियाे । यसरी उपरखुट्टी लगाएर बस्नुका बेफाइदा बारे चर्चा गर्दैछाै ।
खासगरी आफुभन्दा ठूलाबडा, गन्यमान्य व्यक्तिको सामुन्ने ‘उपरखुट्टी लगाउनु’लाई शोभनिय मानिदैन । उपरखुट्टी भनेको एउटा खुट्टामाथि अर्को खुट्टा चढाएर बस्नु हाे । किन यसो भनिएको होला ? जसरी बसेपनि के भो र ? बसाईको पोजिसनले पनि आदर/अनादर जनाउँछ र ? भन्ने लाग्न सक्छ ।
हाम्रो मनमा यस्तै प्रश्न उठ्थ्यो । आखिर उपरखुट्टी लगाउँदैमा किन अरुलाई टाउको दुख्नुपर्ने ?
जबकी वर्तमान समाजमा सभ्यताको कुरा गर्दा हामी त्यही शिष्टचार पालना गर्न बाध्य छौं, जो हिजो हामीले लत्याएका थियौं । हाम्रा पिता-पूर्खाले सिकाएको शिष्टचारलाई हामीले ‘पुरानो सोंच’ भनेर उडाएपनि आज त्यो कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई हेक्का हुँदैछ ।
खासमा खुट्टा क्रस गरेर वा उपरखुट्टी लगाएर बस्नुसँग शिष्टचारको कुरा किनपनि जोडिएको रहेछ भने, यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेछ ।
उपरखुट्टी लगाएर बस्नुको हानिकारक प्रभाव शरीरमा पर्छ । हुन त हामी यसलाई स्टाइलको वा आरमको रुपमा लिन्छौं । कतिपय अवस्थामा आफुलाई ठूलो देखाउन पनि हामी उपरखुट्टी लगाउँछौं, तर यो पोजिसन सही होइन ।
यसरी उपरखुट्टी लगाएर बस्दा पेरोनोल नर्वमा दबाब पर्छ । साथै खुट्टाको नसामा त्यसले दबाब पैदा गर्छ । यसले मांशपेसीलाई संकुचित गराउँछ । र, अस्थायी प्यारालाइसिसको संभावना बढाइदिन्छ ।
यसको असर खुट्टामा मात्र पर्ने होइन । यसले गर्दन र ढाँडमा समेत नकारात्मक असर पार्छ ।
थप अन्य समाचार
विज्ञान भन्छ, विपरित ध्रुबहरु आपसमा आकर्षित हुन्छन् । विज्ञानको यो सूत्र जीवनमा पनि काम लाग्छ। तर ईमान्दार हुनका लागि विज्ञानका अलावा, जीवनमा दर्शन पनि आवश्यक छ । निस्सन्देह, हाम्रो शरीर र दिमागले वैज्ञानिक ज्ञानको आधारमा धेरै हदसम्म काम गर्छ ।
उदाहरणका लागि यदि तपाईं अन्तर्मुखी स्वभावको हुनुहुन्छ भने तपाईं बहिर्मुखी स्वभावको व्यक्ति मन पराउनुहुन्छ । यदि तपाई चञ्चल प्रकृतिको मान्छे हुनुहुन्छ भने शान्त प्रकृतिको मान्छे धेरै मनपराउनु हुन्छ । यसरी हामी आफ्नोभन्दा फरक स्वभाव भएका व्यक्तिलाई मनपराउने गर्छौं ।
धेरै अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् कि विपरीत स्वभावसँग मानिसहरुको सम्बन्ध लामो समयसम्म रहन्छ। तर यो सिक्काको एक पक्ष हो, जो विज्ञानद्वारा सञ्चालित छ । तर हामी पहिले नै भन्दै छौं, हाम्रो जीवनमा एक दार्शनिक कोण पनि छ।
जीवनको शब्दकोशबाट सही र गलतको धारणा हटाउनुहोस्
यदि तपाईं लामो समयका लागि कुनैपनि सम्बन्धमा रहन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले सही र गलतको धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ । मानौं तपाईं एक अन्तर्मुखी हुनुहुन्छ र तपाईंको साथी बहिर्मुखी छन् भने दुवै मानिसहरु पहिले एक अर्काको विपरीत स्वभावको कारण एकअर्काप्रति आकर्षित थिए। तर समयसँगै, पार्टनरको सानासाना कुराहरु रिसाउन थाल्छन् ।
यस्तो अवस्थामा हामी या त साथीलाई पनि आफू जस्तै बनाउन चाहन्छौं या त साथी जस्तै बन्न प्रयास गर्छौं । किनकि हामीलाई लाग्छ, दुईमध्ये एक राम्रो स्वभावको छ र अर्को खराब छ। यस मामलामा झगडा तपाईंहरू दुईको बीचमा हुन्छ । यदि तपाईं वा तपाईंको साथी चुपचाप बसेरै तपाईंभित्र परिवर्तन ल्याउने चेस्टामा छन् भने थाहा पाउँदा हुन्छ तपाईंको स्वभावसँग ऊ रिसाएको छ ।
यही रिस बाहिर निस्किएपछि एक आपसमा द्वन्द्व सुरु हुन्छ । त्यसैले फरक खालको व्यवहार भए पनि न त उसलाई परिवर्तन गराउनुहुन्छ न त आफू परिवर्तन हुनुहुन्छ । जो जस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ उस्तै राख्नु उचित हुन्छ ।
दुवैबाट एउटा साझा बाटो खोज्नु उपयुक्त हुन्छ
माथि भने जस्तै न त तपाईंले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ न त पार्टनरको स्वभावमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्नु उचित हुन्न । तर दुबै मानिसहरु एक अर्कालाई आफ्नै शर्तमा छोडेर बाँच्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा तपाईंको सम्बन्ध चाँडै तोडिने हुन्छ । यदि पार्टनरलाई पार्टी मनपर्छ तर तपाईंलाई मन पर्दैन भने बीचको बाटो यो हुन सक्छ कि पार्टनरले हरेक दिनको सट्टा एक दिन पार्टी गर्ने र तपाईंले पनि एकदिनको पार्टीमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तैगरी, तपाईंको छनौटको गतिविधिमा तपाईंको साथीलाई शामेल गर्नुहोस् । यस तरिकाले तपाईं दुवैले केही नयाँ सिक्न पाउनुहुनेछ। तपाईं पनि एक अर्कासँग गुणस्तरीय समय बिताउन पाउनुहुनेछ । यो नछुटाउनुहोस् कि तपाईंको पार्टनरले हरेक गतिविधिमा तपाईंलाई साथ दिएको हुनुपर्छ ।
अलगअलग दृष्टिकोणलाई नै सम्बन्धले जोड्नुहोस्
हरेक सम्बन्धमा दुवै जनाको दृष्टिकोण एउटै खालको हुन्छ । उनीहरूको जीवन बोरिङ र निरस बन्छ । उनीहरु जीवनमा साहसिक काम गर्न सक्दैनन् । अर्कोतर्फ जब तपाईंहरू दुवैको विचार फरक प्रकारको हुन्छ भने तब हरेक दिन तपाईंहरू दुवैले नयाँ तर्क सुन्न पाउनुहुनेछ ।
तपाईंहरू दुवैले हरेक कुरालाई नयाँ तरिकाबाट हेर्न पाउनुहुनेछ । आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई खुसियाली बनाउनको लागि यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ जसले दुई जनाको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएराखोस् । जहाँ विचार फरक भए पनि भावनाले साइनो जोड्न सकियोस् ।
Prachanda responds to Gagan Thapa, shouting to Congress, insulting Deuba
सिड्नीमा एक नेपाली विद्यार्थीलाई कोरोना पुष्टी, थप चार जना क्वारेन्टाईनमा !